Semalt Inotsanangura Chikonzero Nei Kushandisa Nyaya Yokunyora Basa Inowedzera Sales
Vateereri vedu vakatsigira kuti zvakanakire zvekushandisa nyaya yekudhinda kwebhizimisi rakokana e-commerce webusaiti yepamusoro yakawandisa kupfuura mari yayo. Kana nyaya yako ichibudiswa, inovakugadzirisa zvachose paIndaneti inogara ichitaura kwauri. YakanyatsotsanangurwaZviripo ndezvezvinhu zvinokosha zvinokupa makwikwi ekukwikwidza.
Kana uchida kuvandudza kutsvaga kwejini injini yako, bhizinesi,kana e-commerce webusaiti yepaiti, basa rekunyora nyaya rinogona kukubatsira zvikuru. Kushandisarudzi urwu rwebasa, iwe uchabvisa basa rakaoma pakuita tsvakurudzo, kugadzirisa, kunyora,uye kuverenga kweuchapupu kunoda ruzivo kuitira kuti ugadzirise zvinyorwa zveakakurumbira
- Ivan Konovalov, mutungamiri wekutungamira Muteereri weKatendi we Semalt Digital Services, inopa ruzivo rwezvipi zvinobatsira zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa zvinopa bhizinesi rako.
Paunoshandisa sangano rebasa, iwe uchava nehupamhi hwemhando yakagadzirwa basa rakaitwa kwauri.Izvi zvinowedzera mararamiro ako uye zvinopa vashandi vanogona kunyatsonakaye site yako. Vanyori vezvidzidzo vanoziva kunyora zvakajeka, zvakajeka zviri mumutauro uyo vatengi vako vachanzwisisa.
Nyaya yekunyora mazano inotsigira basa rekutanga. Basa rokutanga rakakosha zvikurukusvika kune yekutsvaga injini rankings inonetseka nokuti injini yekutsvaga ichakutarisa iwe kanavakafunga kuti iwe wakanyora uye ukafambisa imwe nyaya kana zvikamu zvezvinyorwa izvozvo kuti zvibatsire..
Kushanda zvakanyorwa zvinyorwa zvinogona kushandiswawo kupa hutano hwehutano hwemapeji enyu ewebhu. Mutengi anowana pokutanga (zvichida chete) maonero ako kubva pane zviri mukatipane site yako. Kunzwisisa izvi, iwe unonyatsoisa tsoka yako mberi pakugadzirirakuti utengese mutengi pakutsvaga chibatanidzwa icho chichamutungamirira pajiji rako rekutengesa ngoro.
Vanyori vezvenyanzvi vakadzidziswa kuwedzera webhusaiti yenyu, inoita kuti zvive nanisearch engine rankings. Tsvaga injini kugadzirisa chimwe chinhu chinogona kuitikaiwe kuti udzidze, asi nguva yako inokosha zvikuru, uye iwe uchada kuisa pfungwa dzakosimba rekuchengetedza bhizinesi iyo nzvimbo yako inoratidza.
Uchakwanisa kutenga chikamu chezvinhu zvinenge zvese zvichiitakana niche yebhizimisi. Iwe unogona kushandisa zvinyorwa zvinyorwa zvakanyorwa kuti upe vatengiuyo anoshanyira ruzivo rwezvenyanzvi yako yepaiti, kana iwe unogona kuisa mumashandi ekugadzira mazano,mabhuku, zvinyorwa zvemasayiti, nzvimbo dzezvemagariro evanhu, uye mabhuku. Izvi zvichakubatsira iweedza kuvimbika kwako senyanzvi mumunda wako kana niche.
Vanyori vezvidzidzo vachakwanisa kunyora nenzira dzakasiyana-siyana mukurongakuti uenzanise zviri nani nechinangwa chako chevateereri. Ramba uchifunga kuti nyaya yako ichavakuti utaurirane zvakananga nevanotarirwa nevatengi mumutauro waanoitaachanzwisisa. Kana iwe usingakwanisi kuwana zvakajeka, mharidzo yakajeka kuburikidzaiwe unotsvaga mutengi wako, hauzombofi wakakunda bhizimusi rake.
Unogonawo kushandisa shanduro yezvinyorwa zvevhidhiyo kuti uratidze nyaya yakokuti utaure nevateereri vakanyanyisa mukati memutungamiri wako. Iyi ndiyo nziraiyo inotora nyanzvi yekunyora zvinyorwa ichakwanisa kushandiswa kune zvakakwana zvakakwana.
Yeuka kuti iwe uri mumakwikwi nemamiriyoni evamwe vanoita webhusaiti paIndaneti.Iwe unofanirwa kushandisa chero mukana wose unogoneka kuti uwane bhizimisi. Avharejimutengi achaona mawebhusayithi akawanda kana iye akatarisa kuti atenge. Theruzivo rwe Semalt nyanzvi dzinoratidza, kuti mawebsite ane zvinyorwa zvakanyanya nguva dzose anowanikwaiyo hondo, kutora bhizinesi rako kune rimwe rinotevera Source .